Wejiga qarsoon ee macaaneeye, khataraha caafimaad | Ragga Stylish
Goorma waxaan ku badalnaa sonkorta ku jirta bunkeena macaaneeyahaWaxaan aaminsanahay inay tahay ficil caafimaad leh, oo laga fogaanayo kalooriyada xad-dhaafka ah. Si kastaba ha noqotee, caado ahaan waxaa laga yaabaa inaysan caafimaad qabin sida aan qiyaaseyno.
Laga soo bilaabo daraasado kala duwan oo la sameeyay, ayaa waxaa la ogaaday in macaaneeyeyaashu waxay ku falcelin karaan dheef-shiid kiimikaadkeena.
Mid ka mid ah cawaaqibka ka dhasha cunista macaan badan waxay noqon kartaa dufanka isku urursiga, gaar ahaan dadka u janjeera inay miisaan culus yeeshaan.
1 Gulukooska iyo macaaneeye
2 Tijaabada sheybaarka
Gulukooska iyo macaaneeye
Wax macaaneeye ah oo macmal ah ayaa la isticmaalay inaanu culeys badan helin oo laga hortago cudurka macaanka. Si kastaba ha noqotee, isla walaxda loo isticmaalo si loo yareeyo isticmaalka sonkorta ayaa dhiirrigelin kara horumarinta dulqaad la'aanta gulukooska. Marxaladda soo socota, waxaa jiri lahaa kan halista cudur dheef-shiid kiimikaad iyo sonkorowga kahor.
Noocyadaan maaddooyinka ah, ee lagu dhex daray macmacaannada lagu daro jalaatada, cabitaannada fudud, yogurts, iwm, ma ahan boqolkiiba boqol caafimaad. Xitaa haddii aysan lahayn sonkor, way awoodaan saameyn ku yeelata awooda jirka ee isticmaalka gulukooska. Tani waa sababta oo ah, isticmaalkeeda, microbiota xiidmaha, bakteeriyada ku taal xiidmaha, waa la beddelay.
Horumarinta daraasado lagu dabaqay, cilmi baarayaashu waxay doorteen koox jiir ah oo lagu daray macaaneeyaal sida saccharin ama aspartame biyaha ay cabbeen. Natiijooyinka waxaa lala barbardhigay koox kale oo jiir ah oo ku cabbay biyo gulukoos ama biyo kaliya.
Falanqaynta natiijooyinka, waxaa laga soo qaatay taas jiirka qaadanaya macaaneeye (gaar ahaan kuwa qaatay saccharin), ayaa lahaa heerarka sonkorta dhiigga oo sareeya Taasi kuwa kale.
Tijaabooyinka waxaa loo tarjumay dadka, muunadaha boqolaal bina aadam, saynisyahano ayaa xaqiijiyay arintaas bakteeriyada xiidmaha kuwa sida joogtada ah u cuna macaaneeyeyaashu aad ayey u kala duwan yihiin ka mid ah kuwa aan had iyo jeer saccharin ku shubin kafateeriyadooda. Sidaa awgeed waxay daba socotaa in nuucyada noocan ah ee macaanku aysan aad u caafimaad qabin.
Ilaha sawirka: Cuntada dheeriga ah ee nolosha / El Confidencial
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Dhinaca kale ee macaaneeyeyaasha, khataraha la xiriira